यी हुन् पखाला रोक्ने ५ घरेलु उपाय, जानी राख्नुस् ! - Sudur Khabar
कहिलेकाहिँ खानेकुरामा ध्यान राख्दाराख्दै पनि पखालाको सिकार हुन पुगिन्छ । विशेष गरेर अफिसमा काम गर्नेहरु जो बाहिर खानपर्ने हुन्छ, उनीहरुका लागि त यो ठूलो समस्या हुने गरेको छ । पखला लागे पछि शरीरलाई नै कमजोर बनाउने गर्छ । तर, यसले शरीरमा असर पुर्याउनभन्दा अघि नै घरमै उपचार गर्न सकिन्छ ।
२. पखाला लागेको बेला धेरै फाइबर भएका फलफूल वा खाना भने खानु हुँदैन । स्याउजस्ता फलहरु खायो भने स्थिति झन खराब बन्न सक्छ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई लिखित भाषण गर्न बामदेवको सुझाव
एक लाख घुस लिँदै गरेको अवस्थामा सब–इञ्जिनियर पक्राउ